Ardayda Jaamacada Soomaaliya oo deeq gaarsiisay barakacayaasha Garasbaley (Sawiro) – Banaadir weyne
4-ta Abriilo, 2017
Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata Jaamacada Soomaaliya(UNISO) gaar ahaan qeybta Caafimaadka ayaa waxaa ay maanta deeq gaarsiiyeen qoysas barakacayaal oo ku nool deegaanka Garasbaaleey ee duleedka magaalada Muqdisho.
Deeqdan oo isugu jirtey booyad biyo ah,bariis, sokor, saliid iyo lacag cadaan ah ayaa waxaa iska soo ururiyay ardayda barata caafimaadka ee sanadka shanaad kuna jirta simistarka tobnaad kadib markii ay arkeen baahida ay u qabaan dadkooda ay dhibaateysay abaarta ka jirta dalka.
Qoysaska la gaariiyay deeqdan oo gaaraya illaa 70 qoys ayaa ka mahadceliyay gargaarka ay u keeneen walaalahooda Soomaaliyeed ee weli ku jira waxbarashada.
Xaawo Xasan Cabdi oo ka mid ah dadka la gaarsiiyay deeqdan ayaa sheegtay in ay tahay wax lagu farxo in walaalahooda Soomaaliyeed oo arday ah ay jeebkooda wax ka siinayaan waxayna ugu duceysay ardaydaas in waxbarashadooda ay guul ku dhamaystaan.
Ardayda wax ka dhigata jaamacada Soomaaliya(UNISO) ayaa door mug leh ka qaadanaya u kaalmeynta qoyaska ka soo barakacay deegaanadooda oo haatan ku jira xeryaha barakacayaasha.
Dhowaan ayaa ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay gacan ka geystaan u gargaarida dadka ay abaaruhu saameeyeen.
General Tredishe: Saraakiil Alshabaab ah oo baxsad ka ah duqeymaha ayaa soo galay Gobolada Dhexe
Cilad ku timid diyaarad siday Soomaali laga soo masaafuriyay dalka Mareykanka
Arday Cilmi Baaris ku sameysay Awoodaha Hanti Dhowrka Guud
Wasiiru Dowlihii Amniga koonfur Galbeed iyo Xildhibaan ka tirsanaa Hirshabeelle oo ku dhintay Qarax ka dhacay Agagaarka Bali-doogle
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Ganacsatada oo ka wada hadlay cabashooyin ku aaddan canshuuraha